France waa dal aad u qurux badan oo leh meelo badan oo suurtagal ah channel ama riverboat fasaxa. A yar oo ka mid ah gobollada France istaagaan soo baxay ee la xidhiidha in: Midi ah, gobolka Aquitaine, iyo Camargue ah. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay leedahay tayo gaar ah.
Ta hore waxa weeye Canal du Midi, a Heritage Site World iyo biyo mareen waxay ugu da'da weyn macmal ah Europe in weli socota ay dabcan asalka ah. Shaqadan Pierre Paul Riquet ayaa lagu dhammeeyay 1681. Jidka, hoos ka saaciday inay Midi ah, waxaad ka arki kartaa Le Somail iyo Carcassonne, laba degsiimo Dr Makumbe soo jiidasho. Oo haddaad jeceshihiin Cunto wanaagsan iyo khamri weyn, waxaad isku dayi kartaa Minervois caanka Midi iyo Corbieres, iyo cassoulet, a taxadir degaanka.
Waa maxay gaar ahaan soo jiidasho waa in ay la socdaan sida aad ka arki kartaa daaraha waaweyn oo cajiib ah, Daar Dr Makumbe, iyo magaalooyinka jir quaint. Oo kuwa jecel dabeecadda shaki la'aan waxay ku raaxeysan doonaan cidlada aan nadiifka ahayn iyo hodantinimada duurjoogta.
Markaas waxaa jira Ypres, meel cajiib ah oo ka buuxa muhiimadda taariikhiga ah iyo indhaha Vlaamse gaar ah, dhawaaqyada, iyo dhadhan. Dhoofo aad u soo delicious Belgian shokolaatada handmade, ama firfircoon oo adag qamri Belgian. Waddanku wuxuu kugu soo dhaweyn doonaa adiga oo leh farxad saafi ah dhammaan dareenka.
5. Netherlands ayaa
Liiska lama hayo Meelaha ugu fiican Yurub waxay noqon kartaa mid dhamaystiran oo aan Holland. Taas waxaa ka mid ah Meelaha bixiya channel iyo riverboat fasaxa ugu fiican Yurub. dalka ee biyaha lahaa in la helo meel liiska, aaneynayo views ay cajiib ah, wadooyinka muuqaal dabiici ah, iyo Ladnaanta iyo xasilloonida ee shiraaca.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#kanaalka #doon wabi #safar europetrains eurotrip trainjourney